မောင်လူအေးစာမျက်နှာကို အယင် blogspot နဲ့ ထားထားရာကနေ www.mgluaye.com ကို ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ အဓိကတော့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းများ ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Blogspot ကနေပြီး dot com ပြောင်းသွားတာက လွဲရင် ကျန်တဲ့ အပြောင်းအလဲက ယခင် စာမျက်နှာရဲ့ အောက်ဖက်နားမှာ ထည့်ထားတဲ့ Blog Roll ကို ယခင် Blogspot ရဲ့ Blog Roll ကနေ ပြီးတော့ Yahoo Pipe အဖြစ် ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခု အခက်အခဲ ဖြစ်တာက ပိုက်၃ခု အလုပ်လုပ်ပြီး နောက်ဆုံး ပိုက်တစ်ခု အလုပ်မလုပ်သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ပြင်ရပါဦးမယ်။
နောက်တစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးချင်တာ မောင်လူအေးတို့ရဲ့ ပြည်ဂျီတီအိုင် မိသားစု စာမျက်နှာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့က ပြည်ဂျီတီအိုင် ဆင်း အင်ဂျင်နီယာများ စုစည်းထားတဲ့ Community Space လေး ဖြစ်ပြီးတော့ ပြည်ဂျီတီအိုင်က တစ်အူတုံဆင်း ပညာရည်နို့ သောက်စို့ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ဆုံတွေ့ ဆက်သွယ်နိုင်စေဖို့ တည်ထောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စာမျက်နှာလေးကို http://pyaygti.ning.com (သို့) http://pyaygti.net ဆိုတဲ့ လိပ်စာလေး ၂ ခုထဲက ကြိုက်တဲ့ လိပ်စာနဲ့ လာရောက် လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အဲဒီ Community လေးရဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် ပြည်ဂျီတီအိုင်ဆင်း သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်းများ တွေ့ဆုံပွဲလေးကို မေလ ၁ ရက်နေ့ ညနေ လေးနာရီမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ East Coast ကမ်းခြေမှာ ပြုလုပ်သွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ကိုလည်း တစ်ပါတည်း လက်တို့ လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
Filed Under : AGTI, Sharing, Singapore
Feel free to visit my web blog ... nalavke.ru
beneficial blogs We've ever arrive across
Feel free to visit my homepage: divineholdingsinc.com
in the beginning, did not sit well with me after some time.
Someplace throughout the sentences you were able to
make meabeliever but only forawhile. I still haveaproblem with your leaps in logic and you would do nicely to
help fill in all those breaks. When you can accomplish
that, I would surely be impressed.
My web-site - ourauthors.com
my homepage - penpalspoint.com
ယောက်ဖ မက္ကလာ မဆောင်းပါ - ခိုင်ဇော်
မြတ်ခိုင်ကျော် တေးခြင်းများ စုစည်းမှု
တမ်းတပုံရိပ် - ခိုင်ကျော်လင်း
AGTI & SPASS